Ny fananganana lamina fampandrosoana vaovao Ny vy tsara dia tokony hampiasaina amin'ny «lelà» -Interview miaraka amin'i Luo Tiejun, filoha lefitry ny China Iron and Steel Association - China Foshan Hermes Steel
Ny fananganana lamina fampandrosoana vaovao Ny vy tsara dia tokony hampiasaina amin'ny «lelà» -Interview miaraka amin'i Luo Tiejun, filoha lefitry ny China Iron and Steel Association
"Eo ambanin'ny lamina fampandrosoana vaovao, ny indostrian'ny vy dia tsy maintsy misambotra fotoana vaovao amin'ny fananganana fifandanjana vaovao amin'ny famatsiana ao an-toerana sy ny fangatahana ary ny fandraisana anjara amin'ny fiaraha-miasa sy fifaninanana iraisam-pirenena avo lenta." Luo Tiejun, filoha lefitry ny China Iron and Steel Association, dia nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Xinhua News Agency tato ho ato. Ny fanitsiana ny fanavaozana ara-drafitra ny lafiny famatsiana ny “Drafitra Dimy Dimy faha-13” dia nahatanty ny fitsapana ny adin-tsaina tamin'ny taona miavaka tamin'ny taona 2020. Ny indostrian'ny vy, izay mijoro amin'ny teboka fanombohana fampandrosoana vaovao, dia hanohy ny fanavaozana tanteraka ary manatsara tsikelikely ny fahaiza-manao fototra amin'ny indostria sy ny haavo fanavaozana ny rojo indostrialy. Raiso ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia ho toy ny teboka fanombohana hanatsarana ny kalitao sy ny haavon'ny famatsiana, ary avelao ny vy tsara hampiasaina ao amin'ny "ravina".
“Tsy nampoiziko izany!” Notadidin'i Luo Tiejun ny taona 2020 lasa teo, “Tena manahy aho fa ho tapaka ny renivohitry ny orinasa ary ho very vola ny indostria. Vokatr'izany dia tsy misy fatiantoka ao anatin'ny iray volana. Raharaha ohatrinona ny tombom-barotra. ”
Ny angon-drakitra China Iron and Steel Association dia mampiseho fa tamin'ny taona 2020, ny tombom-bolan'ireo orinasa vy tafiditra ao amin'ireo antontan'isa manan-danja dia nitombo isan-taona nanomboka tamin'ny volana Jona, ary ny tahan'ny fananan-trosa dia nitohy nihena isan-taona. Ny fitambarana tombony azo nandritra ny taona dia nitazona ny fitomboana.
"Tao anatin'ny herintaona, ny fanarenana hatrany ny toekarenan'i Shina dia nahatonga ny indostrian'ny vy hihoatra ny antenaina." Luo Tiejun dia nilaza fa, "teboka iray hafa manan-danja ihany koa ny fanavaozana ny rafitra eo amin'ny lafiny famatsiana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nahazo vola ny orinasa vy ary nihatsara be ny toe-bolany. ”
Luo Tiejun dia mino fa ny indostrian'ny vy dia naneho fahaiza-manao matanjaka hiadiana amin'ny risika noho ny fandrosoana tsy miovaova amin'ny fanavaozana ny rafitra eo amin'ny lafiny famatsiana sy ny tombony feno indostrialy feno nangonina nandritra ny taona maro.
Ireo tombony ireo dia hamafisina amin'ny taona 2020 rehefa miparitaka ny valanaretina manerantany. Tamin'ny taona 2020, amin'ny lafiny iray, ny indostrian'ny vy ao amin'ny fireneko dia nitana andraikitra lehibe amin'ny famatsiana vonjy maika, fanampiana ara-pahasalamana, famerenana ny asa sy ny famokarana ary ny fanamafisana ny rojom-pamokarana gadra indostrialy; Etsy ankilany, ny habetsahan'ny fangatahana sy ny famokarana indostrian'ny vy ao Sina dia samy nahatratra ny avo indrindra tamin'izany fotoana izany, izany dia nanjary fitomboana lehibe amin'ny fanafarana vy, ary nanomboka ny volana Jona no nampidirina ny fanafarana harona an-tsokosoko.
"Amin'ny maha firenena mpamokatra vy lehibe indrindra eto an-tany, dia tsy vitan'ny hoe nanery ny fahafaha-mamokatra an'izao tontolo izao i Sina, fa nanome tsena malalaka handevonana ny fahafahan'ny famokarana vy eto amin'izao tontolo izao," hoy i Luo Tiejun.
Raha miverina mijery ny vanim-potoana mahavariana tamin'ny taona 2020, ny famokarana vy eto amin'ny fireneko dia nitohy nihazakazaka tamina ambaratonga avo nateraky ny filàna goavambe, nampiseho ny faharetan'ny toekaren'ny fireneko; tamin'izany fotoana izany dia niovaova tampoka ny vidin'ny fasimainty vy nafarana, indray mandeha ihany koa no nahavoa ny alahelon'ity orinasa ity. Ny fifaliana sy ny ahiahin'ny indostrian'ny vy sy vy dia mombamomba ny fidiran'ny fireneko amin'ny dingana fampandrosoana vaovao sy ny fanovana vaovao amin'ny fotoana mety sy fanamby.
Mijanona amin'ny teboka fanombohana vaovao an'ny "Drafitra Dimy faha-14", ahoana no ahafahan'ny indostrian'ny vy manamboatra ny lesoka ary manomboka tsara?
Navoitran'i Luo Tiejun fa ny tosika amin'ny fanitarana ny fahaiza-manao, ny famerana ny tontolo iainana ekolojika mihamafy, ny fiankinan-doha amin'ny loharanon-karena ivelany, ary ny fifantohan'ny indostria ambany dia mbola fanamby hatrehin'ny indostrian'ny vy mandritra ny fotoana ho avy. "Ny indostrian'ny vy dia mbola manana lesoka ihany koa hanarenana ny fanaingana ny rafitra rafitra fahaiza-manao fototra indostrialy sy ny fananganana rojo indostrialy maoderina."
"Ny fanatsarana ny lamina indostrialy dia tena zava-dehibe amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao fototra indostrialy. Noho ny teritery ataon'ny harena an-kibon'ny vy, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ireo orinasa vy vaovao eto amin'ny fireneko dia mirona kokoa amin'ny fampandrosoana ny morontsiraka. ” Luo Tiejun dia nilaza fa ity no faritry ny seranana amoron-tsiraka, ny vidin'ny logistika ary ny fiantohana ny akora simika Ny vokatra tsy azo ihodivirana amin'ny tombony maro toy ny fahaiza-manao tontolo iainana.
Saingy nomarihiny ihany koa fa ny fanatsarana ny firafitry ny indostrian'ny vy sy ny indostrian'ny vy dia tsy azo "tototry." Ny tsipika farany ambany dia tokony ho ny haben'ny fangatahana eo amin'ny tsena isam-paritra sy ny enti-manana ary ny fahaiza-manao tontolo iainana, ary ny fifandanjana ny firindrana indostrialy iray manontolo dia tokony hojerena mifototra amin'ny raha toa ka azo ampifandraisina tanteraka ny riaka ambony sy ambany ny rojo indostrialy.
"Ny indostrian'ny vy dia tokony hanova ny foto-kevitra momba ny fahaleovan-tena nentim-paharazana, hampihena ny fanondranana vokatra ankapobeny, hampirisika ny fanafarana vokatra vy voalohany toy ny bileta, ary hampihena ny fanjifana angovo sy ny vy." Luo Tiejun dia nilaza fa ny indostrian'ny vy dia hampitombo ny fanavaozana ny rafitra eo amin'ny lafiny famatsiana ary hamarana tanteraka ny fihenan'ny. Ny fahaiza-manao famokarana vy, ny fambolena lalina ny làlana fampandrosoana ny karbaona sy ny karbaona ambany, mitarika fifandanjana an-trano vaovao sy fitakiana fifandanjana amin'ny famatsian-kalitao avo lenta, ary fandraisana anjara amin'ny fiaraha-miasa sy fifaninanana iraisam-pirenena avo lenta.
Luo Tiejun dia nilaza fa amin'ny alàlan'ny fampidirana andianà politika mifandraika sy fanatsarana ny rafitra toy ny fanoloana fahaiza-manao, ny fanafarana akora vy vita amin'ny vy, ary ny fiakarana karbaona, ny indostrian'ny vy sy vy dia tokony hampiasa ny fomba hampiroboroboana ny fampitambarana sy ny fandaminana indray ary ny fanatsarana ny rafitra fanodinana loharanon-karena vy hametrahana amin'ny laoniny ny morontsiraka sy ny tanety. Ny fahaizan'ny famokarana, mampiroborobo hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny famokarana iraisam-pirenena, manatsara tsikelikely ny fahaiza-manao fototra amin'ny indostria sy ny haavo fanavaozana ny rojo indostrialy, ary mampiasa ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia ho hery lehibe hanatsarana ny kalitao sy ny haavon'ny famatsiana, mba ho vy tsara azo ampiasaina ho toy ny "antsy".
Manoloana ny ho avy, inona no atao hoe "ravina" ho an'ny indostrian'ny vy?
Luo Tiejun dia nilaza fa ilaina ny manararaotra fotoana mifototra amin'ny paikady stratejika amin'ny fanitarana ny fangatahana ao an-trano. Miaraka amin'ny fivelarana matanjaka amin'ny Internet indostrialy 5G +, mitombo hatrany ny fampiasam-bolan'ny fireneko amin'ny fotodrafitrasa vaovao sy ny famokarana mandroso, izay manohy mampiditra tsindry vaovao amin'ny fanavaozana ny fangatahana vy amin'ny indostrian'ny vy any ambanivohitra toy ny fiara, kojakojan-trano ary vokatra marani-tsaina.
"Ny fampitambarana sy ny fandaminana indray ireo gadona indostrialy ambony sy ambany dia fangatahana vaovao ho an'ny indostrian'ny vy hahatsapa ny fivoaran'ny indostria eo ambanin'ny lamina fampandrosoana vaovao." Nanamafy i Luo Tiejun fa ilaina ny fanafainganana ny fampiroboroboana sy ny fandaminana indray ao anaty ny indostria, ary hanohizana ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ireo orinasa ambony sy ambany eo amin'ny sehatry ny indostria mba hanamafisana ireo orinasan-tsondrana any ambany ary ireo andrimpanjakana fikarohana dia miara-miasa amin'ny fanavaozana hahatratra ny vaovao mihombo hatrany filan'ny mpampiasa ary manitatra sy manamafy ny gadona indostrialy.
Nilaza izy fa ny "Belt and Road Initiative" dia mitondra mankany amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny fisokafana, ary mitondra fotoana vaovao ihany koa ho an'ireo orinasa vy "handeha manerantany". Ny indostrian'ny vy dia manana ny mampiavaka ny hamafin'ny fampiasam-bola avo lenta ary ny fifandraisan'ny indostrialy matanjaka, ary mpandray anjara tena ilaina amin'ny fananganana fiaraha-miasa avo lenta amin'ny "Belt and Road".
"Ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia iray amin'ireo fomba lehibe iankinan'ny indostrian'ny vy any Shina ny fanovana sy fanatsarana." Luo Tiejun dia nilaza fa ny orinasa vy dia tsy maintsy mahatakatra tsara ny fotoana mety hanarenana ny gadona indostrialy manerantany, ary miaraka amin'izay koa hanombatombana ny toerana misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, hampitombo ny fandrindrana sy ny fiaraha-miasa ary ny hamantatra ny toeran'ny Koperativa, hanamafisana ny fisorohana loza ary hiezaka hamorona tombontsoa mifaninana iraisam-pirenena vaovao miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny famokarana iraisam-pirenena avo lenta.